हजुरबाबु उमेरका भुवन र नातिनी उमेरकी साम्राज्ञीबीचको द्व*न्द्व कहाँ पुगेर टुंगिएला ? – Butwal Sandesh
हजुरबाबु उमेरका भुवन र नातिनी उमेरकी साम्राज्ञीबीचको द्व*न्द्व कहाँ पुगेर टुंगिएला ?
ड्रिम्समा भुवन निर्देशक थिए । भुवनका छोरा अनमोल केसी नायक र साम्राज्ञी नायिका रहेको चलचित्रमा यी दुईको चर्चा भयो । ड्रिम्सले साम्राज्ञीलाई रातारात स्टार बनायो तर सोही फिल्म सुटिङमा घ*टित घ*टना देखि त्यसपछिको अवस्थालाई लिएर धेरै तथ्य उदांगो हुनथालेको छ । साम्राज्ञीले भुवनलाई आफूमाथि र्दु*व्यहारको आ*रोप लगाइन् । त्यसपछि भुवनले सामाजिक सञ्जालमा साम्राज्ञीविरु*द्ध लेख्न थाले ।
भुवन सदाबहार नायक हुन् । उनीमाथि यौ*न र्दु*व्यवहारको आ*रोप आफैमा ग*म्भीर विषय हो । उमेरले ६० कटेका भुवनभन्दा साम्राज्ञी तीन गुणा कान्छी छिन् । हजुरबाबु उमेरको भुवनसँग उनको शितयु*द्ध नै चल्यो । भुवनले चलचित्र कलाकार संघमा साम्राज्ञीविरु*द्ध मा*नहानी गरेको भन्दै उ*जुरी दिए । पछि अ*दालतमा मु*द्दा दायर समेत गरे ।
भुवनको कदमपछि साम्राज्ञी झन् क*डा बन्न थालेकी छिन् । उनीपनि अदालत पुग्ने तयारीमा छिन् । आफूमाथि विभिन्न कोणबाट ड*र ध*म्की आउन थालेको भनेकी छिन् । भुवन र साम्राज्ञीबीचको द्व*न्द्वले चलचित्र क्षेत्रलाई लकडाउन लागेपनि हल्ला झन् बढेको छ । अदालतसम्म पुगेको वि*वाद कहाँ पुगेर टुंगिने हो चासोको विषय बनेको छ ।